चिकन र चावल नूडल्स संग पकाउने मशरूम सूप - नुस्खा
प्रकाशित 15.09.2021 15.09.2021
चिकन, मशरूम, चावल नूडल्स - स्वादिष्ट! र उपयोगी! चावल नूडल सूप स्वादिष्ट खाना मात्र होईन, तर यो पनि शरीर को लागी लाभदायक हुनेछ!
चिकन सूप - स्वादिष्ट, सजिलो, स्वस्थ नुस्खा
स्वादिष्ट र हल्का सूप, प्रत्येक गृहिणी यो को लागी एक नुस्खा हुनुपर्छ। आखिर, पहिलो पाठ्यक्रम न केवल स्वादिष्ट, तर यो पनि शरीर को लागी धेरै उपयोगी छन्!
प्रकाशित 14.09.2021 14.09.2021
धेरै स्वादिष्ट र सामान्य देखिने - लेयर वा Strudel मा पाई, ग्रीस बाट हामीलाई आए र जर्मनी मा "परिमार्जित" गरिएको थियो।
आजकल, त्यहाँ Strudel पाई को लागी व्यञ्जनहरु को एक विशाल संख्या हो, तपाइँ यसलाई विभिन्न fillings, पनीर, किशमिश, स्याउ र अन्य जोड्न सक्नुहुन्छ। धेरै मानिसहरु रातो माछा र पनी नमकीन हेरिंग संग Strudel बेक!
कैवियार र सामन संग सलाद - धेरै व्यञ्जनहरु
हामी सबै रातो क्याभियारलाई माया गर्छौं, यो प्राय: उत्सव तालिका मा देख्नु पर्छ। तर कुन मूल सलाद रातो क्यावियार र माछा संग पकाउन? हामी यो विनम्रता को लागी व्यञ्जनहरु को एक चयन तैयार छ!
Olivier - एक असामान्य नुस्खा
प्रकाशित 13.09.2021 13.09.2021
हाम्रा अधिकांश देशवासीहरु, परम्परा अनुसार, अन्य चीजहरु को बीच, सलाद "ओलिभियर" र "एक फर कोट अन्तर्गत हेरिंग" तयार हुनेछन्। यी स्वादिष्ट सलाद लामो समय सम्म मात्र हाम्रो देश मा माया गरिएको छ, तर विदेश मा, र ...
ओवन पकाएको कद्दू - नुस्खा
पतन मा, धेरै मानिसहरु कद्दू सम्झना, न केवल हेलोवीन को कारण, तर यो पनि किनभने एक ताजा फसल देखा परेको छ। तर कसरी एक मूल र स्वादिष्ट तरीका मा कद्दू पकाउने? यो के संग पकाउने?
खाना कसरी भण्डारण गर्ने? - उपयोगी व्यञ्जनहरु र सुझावहरु
प्रकाशित 12.09.2021 12.09.2021
के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि कसरी खाना सुरक्षित राख्न को लागी, सूखे रोटी बाट के गर्ने? हामी तपाइँलाई उपयोगी सुझाव र व्यञ्जनहरु को एक जोडा बताउनेछौं।
स्वादिष्ट पातलो केफिर पेनकेक्स को लागी नुस्खा
प्रकाशित 09.09.2021 09.09.2021
पेनकेक्स, स्वादिष्ट, पातलो, मशरूम संग भरिएको सबै प्रेमीहरु को लागी समर्पित! चरण-दर-चरण नुस्खा लिनुहोस् र स्वादिष्ट आनन्द लिनुहोस्!
एक प्यान मा तातो सॉसेज र पनीर स्यान्डविच को लागी नुस्खा
धेरै सरल तर स्वादिष्ट स्यान्डविच। नुस्खा छिटो नाश्ता को प्रेमीहरु खुशी हुनेछ।
संसारभर बाट सूप व्यञ्जनहरु
प्रकाशित 27.08.2021 27.08.2021
जो कोही असामान्य केहि मन पराउनेहरु को लागी, जो न केवल सामान्य borscht खाने को लागी। हामी विभिन्न देशहरु बाट सूप को लागी4व्यञ्जनहरु तैयार गरेका छौं।
मीटबल सूप - धेरै व्यञ्जनहरु
प्रकाशित 13.08.2021 13.08.2021
हामीले तपाइँका लागि धेरै व्यञ्जनहरु, मीटबल संग स्वादिष्ट सूप चयन गरेका छौं! त्यहाँ बच्चाहरु र वयस्क जो मसालेदार खाना माया को लागी व्यञ्जनहरु छन्!
53 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 9,330 प्रश्नहरू।